Nagarik News - हलिउड सपनाका पछिपछि
नेपालमा सफल कलाकारका लागि बलिउड सपनाको अर्को केन्द्रबिन्दु हो। हलिउडको सपना भने नेपाली कलाकारले त्यति देख्दैनन्। तर, भर्खरै १५ वर्ष टेकेकी आश्मा गिरीको सपना, लक्ष्य र भविष्य जे भने पनि हलिउड हो। नेपालमा जन्मेहुर्केर हाल क्यालिफोर्नियामा रहँदै आएकी उनी यतिबेला त्यही हलिउड सपनाका पछिपछि कुदिरहेकी छिन्।
क्यालिफोर्नियामा रहेको बार्बिजोन मोडलिङ ट्रेनिङ सेन्टरमा छ महिना ट्रेनिङ लिएपछि उनले मोडल ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्टको अडिसन पास गरिन्। यतिबेला त्यही संस्थासँग आबद्ध उनले अभिनय कक्षा पनि लिइरहेको बताइन्। बर्खे छुट्टीमा जन्मथलो आएकी उनले नेपालका केही फोटोग्राफरबाट तस्बिर पनि खिचाएकी छिन्।
किन डुब्दै छन् फिल्म?
नेपाली फिल्मको उन्नति र प्रगति किन भइरहेको छैन? यसमा राम्रो फिल्म बन्न नसकेर भन्ने सामान्य तर्कमात्र पर्याप्त छैन। निर्माता, वितरक र हलवालाको असमझदारी र द्वन्द्वका कारण पनि फिल्महरू डुबिरहेका छन्।...
काभ्रे लेडिज ट्यालेन्टको फोटोसुट
'बौद्धिकतासहितको सौन्दर्य' भन्ने नाराका साथ आयोजना हुन लागेको काभ्रे लेडिज ट्यालेन्ट शो २०७१ मा १० जना काभ्रेली युवती अन्तिम स्पर्धाका लागि छानिएका छन्।
‘बल्ल गायक भइयो'
के गर्दै हुनुहुन्छ अचेल? केही दिनअघि मात्रै नयाँ एल्बम ‘मिम्जिमा' अर्थात् ‘प्रेयसी' बजारमा ल्याएको छु। त्यसैको प्रमोसनमा लागिरहेको छु। निकै ग्यापमा नयाँ एल्बम ल्याउनुभयो है? पाँच वर्षअघि ‘धानै नाचिन्छ' बोलको...
नेपाली कामदार रोजगारीको खोजीमा विश्वका विभिन्न मुलुक पुग्ने गरेका छन्। सरकारले खुला गरेको १ सय ८ मुलुकमा नेपाली कामदार आफ्नो श्रम बेच्न जान्छन्। नेपाली श्रम बजारमा वार्षिक रूपमा प्रवेश गर्ने...
बलिउड अभिनेता–अभिनेत्रीका नाम बेला–बेला अन्तर्राष्ट्रिय स्टारसँग जोडिइरहन्छ। बलिउड अभिनेत्रीहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभिनेतालाई कहिले ब्वाइफ्रेन्डका रूपमा स्विकार्छन् त कहिले साथीका रूपमा मिडियासामु परिचित गराउँछिन्।
म्युनिखमा रोमाञ्च र पीडा
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललितकृष्ण श्रेष्ठ नेपाली फुटबलमा परिचित नाम हो। देशकै प्रतिष्ठित र सफलमध्येको थ्री स्टार क्लबका अध्यक्ष श्रेष्ठ ए डिभिजन लिगका पूर्वखेलाडी पनि हुन्।...
छन्दोवादी साहित्यकारका पक्षबाट
– गाउँले बलदेव नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान अचेल छन्दोवादी कवि र छन्दका कवितालाई फुटेका आँखाले पनि हेर्न नसक्ने भएको छ। त्यस प्रतिष्ठानले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही प्राध्यापकबाहेक अरूलाई चिन्दैन। नेपाली बृहत् शब्दकोश त्रिभुवन...